Ny fiantraikan'ny fironana marketing dizitaly amin'ireo sendika mpampindram-bola sy orinasa ara-bola | Martech Zone
Ny mpiara-miasa Mark Schaefer dia namoaka lahatsoratra vao tsy ela, Fiovan'ny epic 10 izay manoratra indray ny fitsipiky ny marketing, tsy maintsy vakiana izany. Nanontaniany ireo mpivarotra eraky ny indostria hoe ahoana no niovan'ny marketing be. Ny faritra iray izay ahitako hetsika marobe dia ny fahaizana manokana ny fifandraisana amin'ny prospect na mpanjifa. Hoy aho:
Ity fantson-drakitra ity dia mety hidika hoe "fahafatesan'ny haino aman-jery marobe sy ny fiakaran'ny traikefa manokana amin'ny marketing amin'ny alàlan'ny ABM sy ny fitaovana mitovy aminy. Ho hitantsika ireo KPI sy traikefa niainana Analytics mihoatra ny fahatsapana tsotra sy fahafaham-po ny mpanjifa. ”
Na aiza na aiza no itodihanao amin'ny varotra, ny algorithma, ny automatisation, ny intelligence, ny bot, ary ny teknolojia hafa rehetra dia ampiharina mba hanandramana sy hamaha ny olana mitovy. Ny orinasa dia mampiasa teknolojia hifaneraserana amin'ny vinantony sy ny mpanjifany amin'ny sehatra manokana, manome traikefa miavaka. Na dia tsy manana loharanom-pahalalana hifandraisana amina sehatra manokana amin'ny olona tsirairay aza izahay dia manomboka mihombo ny haitao izay hahavita izany.
MDG dia namoaka ity sary ity vao haingana ho an'ny indostrian'ny Credit Union, Fironana momba ny varotra Union 5. Na dia kendrena amin'ireo sendika mpampindram-bola aza ny infographic, ny orinasa rehetra kosa dia tokony hitandrina:
Ny chat dia hivoatra amin'ny sehatra fifamatorana mahery vaika - Nandritra ny taona maro, ireo sendika mpampindram-bola dia nihevitra ny resaka an-tserasera ho toy ny fanomezana mahafinaritra. Amin'ny 2017, mety hiova izany satria ny mpanjifa dia mihevitra ny fiasan'ny chat ho toy ny fepetra takiana. Ny 24% -n'ny Millennial dia nilaza fa tsy hampiasa andrim-bola izay tsy manolotra endrika fifampiresahana amin'ny Internet
Ny fampielezan-kevitra amin'ny mailaka misaraka dia hanome valiny mahavariana - Ny mailaka dia efa ela ny workhorse marketing dizitaly, ary ara-dalàna izany. Ny tetika dia manohy manome fifamatorana amin'ny vidiny mirary ho an'ny mpivarotra amin'ny sisiny rehetra. Ny fampielezana mailaka misaraka dia manana tahan'ny tsindry 94% avo kokoa ary tahan'ny fisokafana 15% ambony
Ho lasa paikadin'ny votoatin'ny tetikady SEO - Tadidinao fa ny fanatsarana ny motera fikarohana dia ny miafina miafina sy ny tetika sarotra? Tapitra ireo andro ireo. Raha te hanana laharam-pahamehana amin'ny valin'ny karoka ny sendikan'ny mpampindram-bola anao dia ilaina ny mampivelatra ny fanolorana tranonkala izay tian'ny olona hifandraisana ary mety ho zarainy.
Ho lasa tambajotra dokam-barotra (Lehibe) ny tambajotra sosialy - Ny tambajotra sosialy dia nivoatra tsy tamim-pahamendrehana avy amin'ny tranokala fandraisana anjara maimaimpoana ho an'ireo mpivarotra mba hividianana sehatra fandoavambola. Ampahany manan-danja amin'ny fandaniana amin'ny doka rehetra izao izy ireo. 74% amin'ireo mpivarotra no milaza fa mandany teti-bola amin'ny doka ara-tsosialy ary ny fandaniana eran-tany amin'ny doka media sosialy dia vinavinaina hitombo 26.3% amin'ny 2017
Ny hetsika dia ho zava-dehibe kokoa noho ny fifamofoana - Ny fanaovana / fanatrehana hetsika dia mety ho tetika ara-barotra taloha indrindra. Na izany aza, io tantara lava io dia tsy nahatonga azy io hahomby kokoa. 67% amin'ireo mpivarotra no milaza fa tetika ara-barotra mahomby hatrany ny zava-nitranga manokana
Na dia maso ivoho nomerika eto Indianapolis aza izahay, na dia mandefa andiana hetsika isam-paritra hanampy ireo mpanjifantsika hahatratra ireo influencers sy mpividy mety hitranga aza. Manome fotoana mahatalanjona ny varotra nomerika, saingy tsy tokony hampiasaina hisolo ny hafanana sy traikefa amin'ny hetsika na fihaonana mivantana izany!
Tags: Content Marketingfiraisana ara-bolamarketing amin'ny sendikafironana marketing amin'ny sendikafironana amin'ny sendikamailaka misokatrafizarana mailakahetsika marketingzava-mitrangaara-bolaresaka ara-bolaindostria ara-bolaforecastmillennialsfikarohana OptimizationsegmentationSEOdoka ara-tsosialydoka amin'ny media sosialytambajotra sosialy
Marketing amin'ny Youtube: Maninona no mbola ilaina izany!